Obi ụtọ nke anọ nke ọnwa Julaị! Ọ nwere ike ịkwụ ụgwọ ịbụ Patriotic na Social Media | Martech Zone
Obi ụtọ nke anọ nke ọnwa Julaị! Ọ nwere ike ịkwụ ụgwọ iji bụrụ Patriotic na Social Media
Saturday, July 4, 2015 Saturday, July 4, 2015 Douglas Karr
Na United States, anyị na-eme emume Independbọchị nnwereonwe taa… nke akpọrọ July 4th. Riohụ mba n'anya bụ otu n'ime ihe ndị ahụ nwere ike ịdọrọ uche dị ukwuu ma wuo oke akara. N'ezie, mgbasa ozi mgbasa ozi bụ ọwa zuru oke maka ịme ndị na-ege gị ntị aka. Jikọta ha abụọ ma nwee nnukwu ohere iji gosipụta ịhụ mba n'anya gị ma nweta nnukwu mbak ma ọ bụrụ na ị gbanye mmetụta ụfọdụ na ọdịnaya gị.
A sị na m gaara achọta ozi infographic a site na Enweghị atụ otu ọnwa gara aga ka ị nwee oge ịkwadebe, mana ị nwere ike ịdebanye aha na ibe a iji kwadebe na June ọzọ! Unmetric na-enye usoro 5 iji mepụta ọdịnaya ezumike zuru ezu maka ndị na-ege ntị.
Gwa gị ego ma mepụta atụmatụ
Nweta data sitere n'ike mmụọ nsọ site na nyochaghari ọdịnaya nke mere nke ọma afọ gara aga.
Draft na Mepụta ọdịnaya kachasị maka ọwa na ọkara ọ bụla.
Kesaa ọdịnaya kachasị na ọwa ọ bụla.
Nyochaa iji meziwanye ma mepụta mkpọsa ka mma n’afọ ọzọ!
Tags: ezumikeụbọchị mwereonwennwere onwe ụbọchị infographicJuly 4thunmetricọnweghị akara infographic
Kedu ihe ndị ahịa na-eche maka ihu ala mgbasa ozi ọhụụ?
Otu Udiri Asi Nwere Ike withga nke Ọma na Vine Marketing